Ijackethi efakwe ngumoya, amaBhantshi ePuffer, Ijacket yeHybrid - iSenkai
Ijakhethi Yeski Nejakhethi Yesithwathwa
I-Jacket Parka Ehlanganisiwe Nephansi
Ijezi Lejazi Loboya
Puffer Jacket Futhi Vest
Ingubo yangaphandle yePadding
Abesifazane abangena manzi bephetha ibhantshi langaphandle 9220306
Incazelo: Ijackethi engaphandle yokuphrinta yabesifazane ayinamanzi futhi ayinamoya. Ukumelana negobolondo eliqinile nomthungo oqoshiwe ngokugcwele kukuvikela ekuvuzeni nasekugcwaliseni. I-100% ye-polyester efinyiwe evaliwe yabesifazane yokugoqa ibhantshi langaphandle ikugcina ufudumele. Izindwangu eziguquguqukayo nezindishi eziguquguqukayo zingasiza ukugcina umoya ungangeni futhi zisingathe kalula isimo sezulu esibi sasebusika, njengezimvula, usuku olunamafu noma lweqhwa. Amaphakethe wesandla ama-2 alungele impilo yansuku zonke .Kulungele ukugqokwa kwansuku zonke, njengokushushuluza, ukushibilika eqhweni ...
Ijacket likaLady elingangeni manzi i-9220314
Incazelo: Ibhantshi likaLady elingangenwa manzi lifudumele futhi alinomoya. Ukumelana negobolondo eliqinile nomthungo oqoshiwe ngokugcwele kukuvikela ekuvuzeni nasekugcwaliseni. I-100% ye-polyester efinyiwe evaliwe yabesifazane yokugoqa ibhantshi langaphandle ikugcina ufudumele. Izindwangu eziguquguqukayo nezindishi eziguquguqukayo zingasiza ukugcina umoya ungangeni futhi zisingathe kalula isimo sezulu esibi sasebusika, njengezimvula, usuku olunamafu noma lweqhwa. Amaphakethe wezandla ama-2 kanye nephakethe lesifuba elingu-1 zikulungele impilo yansuku zonke .Kulungele ukugqokwa kwansuku zonke, njengokushushuluza, i-snowb ...
Ijacket yabesifazane ejiyile eyingxube eyi-17930
Ijacket yabesifazane yesiketi yakudala yenziwa ngoboya obungu-100% be-polyester obunobuso obumbelwe ijezi no-100% wenayiloni, induduzo engenanqwaba. Ukwakhiwa kwe-Flat-seam kunciphisa inqwaba futhi kusiza ekuqedeni ukuxegiswa. I-Stone noma uHeather Obsidian, la mathoni athulisiwe asebenza nganoma yikuphi ukubhanqa kwemfashini ongakucabanga. Yigqoke noma uhlale ukhululekile, le ngcezu iphelele kunoma yisiphi isimo nemvelo. Ukucaciswa ...
Ibhantshi labesilisa eligciniwe elingenamthungo uziphu pocke ...
Le Jacket Yabesilisa Ebekiwe iyilokho okudingayo ebusika obubandayo. Ikhono elihle lokuvikela, ngisho nasezimweni ezimanzi. I-microfiber padding efudumele kakhulu futhi engasindi ihlanganiswe nendwangu yangaphandle exosha amanzi-ilungele ukugqoka kwansuku zonke. Ijakhethi efudumele enezintambo ezinwebekayo ezithambile ezinyaweni nakuma-cuffs yenza umoya ungangeni. Le jazi lamadoda eligwedliwe laklanywa futhi lenzelwa ukuthola ukusebenza okulingene nokufanelekile, okukuvumela ukuthi wenze okusemandleni akho ngenkathi ujabulela ukuphuma okuhle ...
abesifazane padding ongaphandle ibhantshi 8218394 wa ...
Ijackethi yabesifazane eboshwe ngaphandle ikugcina ufudumele. Amanzi angenawo amanzi, umoya ongenawo umoya nokushisa kwejakhethi yeqhwa ukuvimbela amanzi emvula. Ukulungiswa kwesiphepho kanye nokuqinisa izikhonkwane eziboshiwe kusiza ukugcina umoya ungaphandle.Ukwakhiwa okusha kwenza ijazi libe nekhwalithi ephezulu futhi libukeke kahle.Lilungele imisebenzi yangaphandle. Izici: 1. Indwangu: indwangu yegobolondo: indwangu yobungcweti yamanzi egxotshiwe, indwangu yokufaka: 100% i-polyester / uboya. I-2.Waterproof & windproof: Indwangu ephezulu ye-polyester igcina umzimba wakho womile futhi ufudumele ...
ibhantshi labesifazane elingangenwa ngamanzi i-9220501-2-6
Ijakhethi yabesifazane evikelwe ngumoya igcina umoya ungangeni. Ijackethi yegobolondo elingangenwa ngamanzi ikugcina womile futhi unethezekile emvuleni naseqhweni .Iqhwa lesiphepho elingatholakali elinentambo kanye nezindishi eziguquguqukayo zengeza ukufudumala .Ukugcwaliswa kwekhwalithi ephezulu kukugcina ufudumele .Lokhu kulungele imisebenzi yangaphakathi nangaphandle. Izici: 1. Indwangu: indwangu yegobolondo: indwangu yobungcweti yamanzi egxotshiwe, indwangu yokufaka: 100% i-polyester / uboya. 2.Amanzi: Ijakhethi yabesifazane basebusika yenziwe ngendwangu yokuphefumula engenamanzi, futhi wonke amaziphu ...
Ijazi lomkokotelo labesifazane WARMY
Ijazi loboya eligqokwe ngabesifazane lenziwe ngoboya obuhle beFaux Fur.Ijakhethi yoboya Hlala ufudumele futhi uhlale ungumuntu oqinile nasesimweni sezulu esibi kakhulu kuleli jazi likanokusho. Ingobungani bemvelo futhi ingokwemvelo.Izigqoko ze-Hood ne-Elastic zingavimbela umoya ukuthi uphume.Ijazi umuzwa wedizayini okulula ukugqokwa. Kuyinto evamile futhi ibuye ibonwe ngokusemthethweni ngokugqoka, kuyinto enezinhlobonhlobo zokuzivumelanisa. Umdlalo ophelele ngezikhindi zakho ozithandayo, ama-leggings, amabhulukwe amnyama, amajini ama-denim, njll.
Ijackethi yeqhwa elingena manzi labesifazane NL0039KI-F
Ijackethi yokushushuluza yabesifazane ayinamanzi futhi ayinamoya. Ochwepheshe bamanzi oxosha amanzi, ulwelwesi lwe-fluff nendwangu eqinile iqinisekisa ukugcinwa kokushisa okuhle kakhulu, Ilwa nemvula noma izulu. I-hood eguquguqukayo esusekayo isiza ukugcina umoya uphume futhi uhlale ukhululekile. Isitayela sokukhululeka esinempahla esheshayo esomile. I-logo yokuphrinta ikhombisa umkhiqizo esifubeni sesobunxele. Isetshenziselwa ukwehla eSkiing, Snowboarding, Snowsports neminye imidlalo yasebusika yangaphandle. Ukucaciswa ...
Sesiqedile futhi sakudlulisa ukuhlolwa kwamabhuku embonini yalo nyaka weBSCI. Sonke siyazi ukuthi isitifiketi seBSCI sizuzisa ifektri: 1.Feza izidingo zabavakashi. 2. Isitifiketi esisodwa se-diff ...
Ukusetshenziswa kwendwangu ye-cationic
1. Indwangu ye-cationic inokumunca okuhle kakhulu kwamanzi futhi umehluko wethangi lokudaya mncane kakhulu, ngakho-ke ilungele ikakhulukazi izingubo zezemidlalo, ikakhulukazi ezenziwa ama-sweatshirts, ama-sweatpants, ...
Izinzuzo zendwangu eyenziwe kabusha
Ngokwenziwa ngcono kokuqwashisa kwabantu ngokuvikelwa kwemvelo kanye nokuthuthuka kobuchwepheshe, izindwangu ezenziwe kabusha sezingenile ezimpilweni zethu. Inkampani yethu manje isebenzisa izindwangu ezenziwe kabusha ...
Ijackethi yokushushuluza, Ijackethi yeSki, Ibhantshi leSki elifakiwe, Ijackethi Yezingane, Ijackethi yeSki yama-80s, Ijacket Yesikhumba,